စိတ်နဲ့ကိုယ် သဘောထားခြင်း မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါသော်လည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စိတ်နဲ့ကိုယ် သဘောထားခြင်း မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါသော်လည်း
စိတ်နဲ့ကိုယ် သဘောထားခြင်း မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါသော်လည်း
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Jan 3, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 15 comments
:gee: စိတ်နဲ့ကိုယ် သဘောထားခြင်း မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါသော်လည်း :buu:
လူတိုင်းလူတိုင်း ဘ၀မှာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်ပါပဲ တနည်းဆိုသော် စိတ်ထဲကမပါပဲ ပြုမူလိုက်ရတဲ့အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေ များစွာရှိနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် လူယဉ်ကျေးတွေလို့ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းအစုအဝေးတွေမှာဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
စိတ်ထဲကမပါလင့်ကစား မိမိအကျိုးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊တခြားတစ်စုံတစ်ရာအတွက်သော်လည်း ကောင်းပြုမူပြောဆိုဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် မိမိစိတ်မှာ ဘယ်လောက်မှအမှတ်ထင်ထင်မရှိသွားလောက် တာမျိုးတွေရှိသလို၊စိတ်ထဲကမပါပဲ ကိုယ်နှုတ်အမူအယာကပြုမူလိုက်ရမှုအပေါ် စိတ်ခံစားချက်စွဲမြဲစွာဖြင့် တမ်းတသသ အလိုမကျဖြစ်နေဆဲ ရှိနေတတ်သူများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ်အလိုမတူပါပဲ ပြုမူလိုက်ရတဲ့အမှုလေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
အထက်ကနှစ်ချက်မှာ ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မပြုမူလိုက်ရမှုအပေါ် စိတ်ခံစားချက်အလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ရှိနေဆဲပါပဲ။
လူထဲကလူဖြစ်တဲ့ကျွန်မမှာ စိတ်နဲ့ကိုယ်အလိုအတူပဲ ပြုမူပြောဆိုဆက်ဆံနေထိုင်မှုများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိုများစွာတွေထဲမှာမှ ကျွန်မစိတ်ကို မှတ်မှတ်ထင်ထင် အလိုမကျဖြစ်နေဆဲဖြစ်အောင် ပြုမူခဲ့မိတဲ့ကိစ္စလေး ကတော့ ကျွန်မကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ အသက်၅၀၀န်းကျင် လူကြီးတစ်ယောက်ကို မိမိကိုးကွယ်၊လေးစားသမှုပြုတဲ့ လူတစ်ဦးပမာ ရှိခိုးကန်တော့ခဲ့မိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင် ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားမရှိ၊ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှုမရှိတာမှန်ပေမယ့် မိမိရဲ့မိဘတွေလောက်အရွယ်ရှိတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ကို ကန်တော့ခဲ့ရခြင်းဟာ ဘာမှစိတ်အလိုမကျ ဖြစ်စရာမရှိဟု ထင်ကောင်းထင်စရာပါ။
သို့သော် ကျွန်မ ထိုလူကြီးကို ကန်တော့ရခြင်းကား ကျွန်မရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ ချစ်သူကောင်လေး တစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မစိတ်မှာ အလိုမကျမှုနဲ့အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်မိနေခဲ့တာ ဖြစ်တော့တာပင်။
ကျွန်မတို့မိဘနှစ်ပါးဟာ လောင်းကစားကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ရင်အရမ်းကို ကင်းရှင်းတာကြောင့် အိမ်မှာ လောင်းကစားအကြောင်း(ဥပမာ-၂လုံး၊၃လုံး)အကြောင်း လာပြောတဲ့လူပင်မရှိပါ။
ထို့အပြင် ကျွန်မတို့မိသားစုမှာ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသုံးပါးမှလွဲ၍ ၀ါဝင်ဝါထွက်နတ်တောင်တင်တဲ့ ဓလေ့မရှိတာမို့ ၃၇နတ်တို့၊ဘိုးတော်၊ဘွားတော်တို့ဆိုတာ ဝေလာဝေးဖြစ်လို့နေခဲ့တာပါ။
ကျွန်မရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ချစ်သူကောင်လေး(A-ပဲထားပါတော)့ရဲ့မိသားစုကတော့ ကျွန်မတို့မိသားစုနဲ့ခြားနားစွာ ၂လုံး၊၃လုံး ရှိသမျှအလုံးအကုန်ကစားလျက်၊နတ်ပေါင်းစုံနဲ့ဘိုးတော်တွေကို ဆည်းကပ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်း ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀မို့ တဇွတ်ထိုးတဇောက်ကန်း မျက်ကန်းချစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ကိုးကွယ်မှုကိုတော့ ကျွန်မမလွဲမှားစေခဲ့ပါဘူး။
သို့သော် ကျွန်မစိတ်ကိုစွဲမြဲသွားအောင် လုပ်မိတဲ့အလွဲကတော့ တစ်ရက် ကျွန်မနဲ့Aတို့နှစ်ယောက်
A ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူ သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘိုးတော်ရဲ့ကျောင်းကိုလိုက်သွားကြပါတယ်။
အဓိကကတော့ A ရဲ့ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်တဲ့။
ကျွန်မကို A ကရော သူ့အမေကပါ အတင်းခေါ်တာကြောင့် ကျွန်မ စိတ်မပါလက်မပါလက်သွားမိတယ်။
အမှန်ဝန်ခံရရင် စိတ်မပါတာက ကျွန်မအယုံအကြည်ကင်းမဲ့လွန်းတဲ့ လူတွေကိုလောင်းကစားကိစ္စတွေ ကူညီပေးတဲ့ဘိုးတော်ဆိုတာရဲ့နေရာကိုသွားလို့ပါ။ဒါပေမယ့် ကျွန်မနဲ့ A နှစ်ယောက်သား နောက်ကျကျန်ပြီး အတူယှဉ်တွဲ စက်ဘီးစီးသွားရတာကိုတော့ ကျေနပ်မိခဲ့တာအမှန်ပါ။
ကျွန်မတို့သွားရတဲ့ ဘိုးတော်ရဲ့ကျောင်းက ၃မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောရွာဘက်မှာမို့ ဖုန်ထူထူလမ်းကနေပဲ ကျွန်မတို့သွားကြရပေမယ့် လမ်းတစ်လျှောက်ပျော်ခဲ့မိပါတယ်။
ဟိုရောက်တော့ ချက်ချင်းပဲ ကျွန်မစိတ်ထဲ ညစ်ညူးညူးကြီးဖြစ်လာပါတယ်။
A ရဲ့အမေနဲ့အဒေါ်တို့က ဘိုးတော်တည်ထားတဲ့ ဘုရားကို ပန်းရေချမ်းတွေလဲကြ၊တံမြက်စည်း တွေလှည်းကြလုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မကလည်း အရှက်မရှိ မျက်နှာလိုမျက်နှာရ ၀င်လုပ်မိတာ အမှန်ပါ။ကျွန်မကိုးကွယ်ရာဘုရားစေတီတစ်ခုမှာ ကျွန်မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေဆိုတာမှန်ပေမယ့် ရလိုမှုပေါင်းမျာစွာနဲ့လူတွေရဲ့ကြား ကျွန်မရဲ့ရလိုမှုကတော့ သူများတွေအတွက် ရယ်စရာဖြစ်စေမယ့် မတော်ရသေးတဲ့အမျိုးတွေရဲ့မျက်နှာရမှုဖြစ်လို့နေတာ အလွန်မှရှက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘုရားမှာ ဝေယျာဝစ္စပြုအပြီး ဘိုးတော်ကျွေးတဲ့ သက်သက်လွတ်ထမင်းကိုမစားမနေရစားရပြန်သည်။ စားချင်စိတ်လုံးဝမရှိပေမယ့် ကျွန်မအပေါ်တစ်မျိုးတစ်မည်ထင်ကြမှာကို တွေးကြောက်ကာ စားခဲ့ရသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချိန်ကာလကြာသည်အထိမုန်းနေမိသည်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဘိုးတော်ရဲ့ခြေရင်း မိမိတို့အလိုဆန္ဒအသီးသီးကို လက်အုပ်လေးချီကာ ရှိခိုးတောင်းဆို နေကြတဲ့လူတွေအကြား ဘိုးတော်ထံမှ ဘာမှရလိုမှုမရှိ၊ယုံကြည်ကိုးကွယ်လိုမှုမရှိပါပဲ ၀င်ရောက် ရှိခိုးကန်တော့ လက်အုပ်ချီထားခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မအဖြစ်ပါပဲ။
ထိုသို့ကျွန်မကိုးကွယ်နေကျ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနှယ် လက်အုပ်ချီမိုးကန်တော့ပြီးချိန်မှာ ကျွန်မစိတ်တွေဟာ အလိုလို ညစ်ညူးရှုပ်ထွေးကာ မွန်းကျပ်လာတာကြောင့် လူအုပ်ကြားမှ ဖယ်ခွာကာ ကျောင်းနောက်နားက ရေကန်နားမှာ တစ်ကိုယ်တည်းသွားရပ်နေမိသည်အထိပါပဲ။
ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှကိုတော့ ကျွန်မနဲ့အတူသွားခဲ့တဲ့ A ကိုလုံးဝမပြောပြမိခဲ့ပါဘူး။
သူများတွေအတွက်တော့ ဘာရယ်မဟုတ်ထင်မှတ်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လို့နေမှာမှန်ပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ကို အသိဆုံးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကတော့ မပြုမီမှာကော၊ပြုနေဆဲမှာကော၊ပြုပြီးခဲ့ကာလများစွာမှာပါ ပြန်တွေးမိတိုင်း အရှက်ရ၊စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုလိုစွဲထင်နေမိခဲ့တယ်။
သာမန်လူကြီးတစ်ယောက်ကို စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ကန်တော့လိုက်ခဲ့မိရင်တောင် ဘယ်လိုမှခံစားမိတော့မှာမဟုတ် ပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအတွက် ကျွန်မသဘောမတွေ့ဆုံး ဘိုးတော် ဆိုတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ကို ကန်တော့မိခဲ့လိုက်တဲ့အဖြစ်ရယ်ပါ။
မိုက်လေး..နေတဲ့ဆီမှာလည်း အဲ့လိုပါပဲ မနော ဆိုလားဘာဆိုလားပဲ..။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ၂လုံး ၃ လုး ဂဏန်းတောင်ဖို့လူတွေ မနက်ကနေ ညနေမိုးချုပ်တဲ့အထိ
ရှိနေတက်ပါတယ်..။နောက်ပြီး သူတို့က အဲ့လို ဂဏန်းတွေပေးတဲ့အပြင် ပယောဂါ လည်းကုကြတယ်.။
မေမေ နဲ့သွားတုန်ကပါ စိတ်ထဲကတော့ဘာမှမပါ ပါဘူး….။
ငယ်တုန်းကတော့ စိတ်ထဲ ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ၊
သူများပြော နားထောင်လိုက်၊ နဲ့ ဖောရှောတွေလုပ်လာရတာ မသိသာပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်း စိတ်မပါရင် အလိုက်အထိုက်ကို မနေချင်တော့တာလည်း အသက်က စကားပြောခြင်း တစ်မျိုးများလား။
ကိုယ့်နဲ့ စိတ်/အပြုအမူမတိုက်ဆိုင်တိုင်း၊ ပြောထွက်လိုက်ရင်ပဲ ရိုင်းများသွားလား။
တွေးရတာများတယ်။ မတွေးတော့ဘူး။ :harr:
အကျိုးမျှော်ကိုးပြီး လုပ်ရင်လည်း ပေးရတာနဲ့ ရတာတန်တယ်ထင်ရင် စိတ်ထဲထားမနေပါနဲ့လေ။ ပင်ပန်းလွန်းလို့။
ဒါမှမဟုတ် မလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စကို လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ ဘာကြီးဖြစ်နေနေ။
ဟုတ်တယ် ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး ရေ..အစ်မလည်းဒီဘက်ခေတ်ထိဒါတွေရှိနေတုန်းဆိုတာသိပါတယ်။
ချစ်မမရေ အဲ့တုန်းက ငယ်ဘ၀ရီးဇားကြောင့် မျက်နှာလိုမျက်နှာရလုပ်မိတာလေ။
အခုလိုအချိန်ဆိုရင်တော့ အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေ ယောင်လို့တောင်ခြေဦးလှည့်မိမယ်မထင်
ပထမဆုံးကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကချစ်သူထားခဲ့တာ ယောက္ခမလောင်းကပါ ကြည်ဖြူတဲ့ သဘောပေါ့နော်.. .. အခု ယောက္ခမလည်း အဲ့လိုပဲမို့လား…
အစ်မရေ..ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့ဒီစိတ်ကိုရအောင်ဖျောက်လိုက်ပါ… လုပ်မိပြီးသား ကိစ္စတစ်ခုကို ခံစားနေရရင် ကိုယ်ပဲ ပူလောင်တယ်မို့လား…
ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ မတတ်သာလုိ့ လုပ်ခဲ့ရတာ ပြင်လို့မှမရတော့တာလေ… အနာဂတ်ကို သယ်မသွားပါနဲ့တော့နော်…
ဟုတ်ကဲ့ရှင် ချွေးမကဆုံးမတော့လည်း နားထောင်ရတာပေါ့ကွယ်….
ကျုပ်ကိုယ်တွေ့ လေး တစ်နေ့ ကျပြောပါဦးမယ်
ကျုပ်လည်း သိပ်သဘောမတွေ့ တာတွေရှိတယ်
သည်ဘိုးတော်လို လူတွေကို ကိုးကွယ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး ဟာ ယောက်ျားတွေထက်စာရင် ၊ မိန်းမတွေက ပိုများပါလိမ့်မယ် ။ တစ်ခြားမကြည့်နဲ့ ၊ တောင်ပြုံးပွဲတို့ ပခန်းပွဲတို့၊ ရတနာ့ဂူပွဲတို့ မှာ များတာက အမျိုးသမီးထုတွေချည်းပဲ ၊ ယောက်ျားတွေလဲ ပါတာပေါ့ ။ နောက်ပြီး သည်လို ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာလဲ ၊ ကိုးကွယ်တဲ့လူဟာ ကိုယ့်စိတ်အင်အားကို ကိုယ်မြှင့်တင်လိုက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အဲ့ပွဲတွမှာ လေ့လာကြည့်ရင် ၊ ဒီလိုဆုတောင်းတာကို မြင်ရတယ် ။ ဒီတစ်နှစ်လဲထပ်ပြီး အောင်မြင်အောင် မစပေးပါတို့၊ ဒီနှစ်အောင်မြင်အောင်မစပေးရင် ၊ နောင်နှစ်ပွဲမှာ ဘာလှူပါမယ် ညာလှူပါမယ်တို့ … အစရှိသဖြင့်
ကိုဆာမိရဲ့ကိုယ်တွေ့က ဘယ်ဘိုးတော်နဲ့များလဲဆိုတာ ဖတ်ချင်သေးသားရှင်။
ကိုပေပြောတဲ့ တောင်ပြုံးပွဲကို ကျွန်မတစ်သက်မှာ တစ်ခါရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အထက်ဘုရားဖူးထွက်ရင်းနဲ့ ပွဲတော်ကာလကြုံလို့ သွားဖူးတယ်ရှိအောင် သွားခဲ့ကြတာပါ။
လမ်းတစ်လျှောက် ပိုက်ဆံချပေးခဲ့ပါဆိုတဲ့ကလေး၊လြူ့ကီးတွေကြောင့် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပါရှင်။
ကားတွေက ၀ီခနဲ ၀ီခနဲ ကလေးတွေက ဟိုကပြေးလာလိုက်၊ဒီကပြေးလာလိုက်နဲ့ ကြောက်စရာပါလား။
တောင်ပြုံးပွဲဆိုတာကလည်း ကိုယ်က နတ်ကန္နားပွဲအသံကြားရင်တောင် ခေါင်းကိုက်ချင်ချင်ဆိုတော့ တော်တော်လေးကို စိတ်နဲ့ကိုယ်ညစ်ထေးစုတ်ပျက်လာတာပါပဲ။
အနဲဆုံးတော့ သူလဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေ ရှိခဲ့မှာဘဲ လို့ တွေးပြီး အဲဒီ အတွက် အရိုအသေပေးတယ်လို့ စိတ်ထဲ တွေးလိုက်ပါ သမီးရယ်။
ရှက်စရာလဲ မလိုလောက်ပါဘူး သမီးရေ့။ :hee:
အမှန်တော့လည်း ဘိုးတော်က ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ ဘုရားတွေလိုက်တည်တယ်။ဓာတ်ကျတဲ့လမ်းဆုံတွေမှာ သက်သက်လွတ်တွေလိုက်ကျွေးတယ်။
ဘိုးတော်လုပ်သမှ စိုက်ထုတ်အကုန်ခံမယ့် ဒိုင်ဘောစိတွေကလဲ တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ပေါ့။
ဘိုးတော်သမီးအပျိုလေး(အဲ့အချိန်က ကျွန်မတို့ထက်နဲနဲကြီးမယ်)က ကတုံးတုံးပြီး ယောဂီအထက်အောက်ဝတ်တယ်။ဖိနပ်မစီးဘူး ဂျစ်ကားကိုဒရကြမ်းမောင်းပြီး တောင်ငူတက်ဈေးဝယ်လေ့ရှိတယ်။
ဘိုးတော်က ဓာတ်ကျတယ်ဆိုပြီး တခါတလေ ရဲယူနီဖောင်းကြီးနဲ့လျှောက်သွားတတ်တယ်။တခါတလေ ကတ်ဆက်ကြီးဖွင့်ပြီး ကိုင်ပြီး လျှောက်သွားတယ်။
အရီးပြောသလို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ဘုရားတည်၊အလှူပြုတာတွေဆိုရင်တော့ အဲဒီကောင်းမှုတွေကြောင့် လေးစားသင့်သလားတော့မသိဘူး။
တစ်ပါးသူ ဘိုးတော်တွေ မယ်တော်တွေကိုတော့ မဆည်းကပ်ဘူးဗျ၊ တနွယ်နွယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့။
ဘုရားတည် နဲ့ လူစည်တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းအလှုတွေထက် သက်ကြီးရွယ်အိုဂေဟာတွေ၊ ဆွံအနားမကြား စတဲ့နေရာတွေ၊ မပြည့်စုံတဲ့ မိဘမဲ့ကူညီကျောင်းတွေ နာရေးကူညီအခမဲ့ဆေးခန်းတွေ ကို တတ်နိုင် သလောက်လှုရတာပို စိတ်ဝင်စားမိတယ်၊
ဒါပေမယ့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓအယူဆိုပြီးတော့လည်း လက်ကိုင်ထားမနေဘူး သူ့သဘောဆောင် စီးပွားအောင် ဆိုသလို အဆင်ပြေစွာ ဘာသာပေါင်းစုံ ကိုးကွယ်မှု့ပေါင်းစုံနဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြုမူနေတယ်လေ။
သူကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု့က သူ့အပိုင်း ကိုယ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု့က ကိုယ့်အလုပ်လို့ထားတယ်၊ ဆိုလိုတာက တောင်ပြုံးလည်း အဖော်ကောင်းလိုက်သွားပေးသလို တရုတ်ဘုံကျောင်းလည်း ကြုံရင်ဝင်တတ်ပြီး သောကြာနေ့ဝတ်ပြုသူကိုလည်း လဘက်ရည်ဆိုင်က ထိုင်စောင့်ခဲဖူးတယ်လေ။
လုပ်ငန်းငွေကြေး ပေါင်းသင်းရေး အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အားလုံး ဝေါမီတော်ဖီ ကော်ဖီဖျော်မည်ပေါ့။
တောင်ပြုံးကိုကတော့ တစ်ခါပဲရောက်ဖူးတာ။အဲ့နှစ်မှာပဲ ကျပ်ပိတ်သိပ်နေတာလားမသိပါဘူးရှင်။
ဘယ်နားသွားသွား လူတွေကိုတိုးဝှေ့ကျပ်ပိတ်နေတာနဲ့ ဘာကိုမှလဲကောင်းကောင်းမမြင်၇။
မသိရင် ဖုန်လုံးရှူပြီး လူသွားတိူးလိုက်သလိုပဲ။ကိုယ်ကပဲအထာမကျလို့ လမ်းစဉ်မသိလို့လားတော့မသိဘူး။
ကျုပ်က ဘိုးတော် လုပ်မလို့ ချင်းချားနေဒါ …
ခု ဘိုလုပ်ရဒေါ့မဲ …
နောက်တာပါ ယောက်ခမဂျီးရေ ….
ကိုယ် စိတ်မပါဘဲ လုပ်နေရတဲ့၊ လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အလုပ်တွေ ..
လောကကြီးမှာ တစ်ပုံတစ်ခေါင်း ပါပဲ ….။
ဒါပေမယ့်လို့လည်း အစွဲအမှတ် မကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာ ….။
ရှင်သာရိပုတ္တရာ တို့တောင်မှ …
အစ ပထမ ဒိဋ္ဌတွေဆီ ဆည်းကပ်ပြီးမှ …
ဘုရားရှင်ဆီ ရောက်ခဲ့ရတာ မဟုတ်လား ….။
လူသားတွေဟာ တကယ့် အမှန်ကို မမြင်နိုင်သေးသရွှေ့ ကာလပတ်လုံး ဒိဋ္ဌိတွေကို ဦးချမိကောင်း ဦးချနေမှာလို့ ထင်မိပါတယ် ခင်ဗျာ ….။
ဒါကြောင့် ဒီအတွက်နဲ့ စိတ်မပျက်ပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါကြောင်း …။
ဘယ်က သမက်ကို ပြောနေတာလဲ
ဘိုးတော်ဆိုတာ ဦးမာဃလောက်တောင် အကြားအမြင် မရပါဘူး
တစ်နေ့တစ်နေ့ ဦးမာဃကို အလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေထဲမှာ သူတို့တွေပါ ပါတယ်။